မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ စာအုပ်ဘာသာပြန် ဝန်ဆောင်မှု
ProofreadingServices.com မှ စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုများနှင့် ဖြစ်ရပ်မှန်ဝတ္ထုများကို မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပိုမိုများပြားသော စာဖတ်သူများထံသို့ ရောက်ရှိစေရန်နှင့် စာအုပ်များ ပိုမို ရောင်းချ နိုင်စေရန် အတွက် စာရေးသူအား ကူညီဘာသာပြန်ဆိုပေးနေပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင် ဘာသာပြန် ဝန်ဆောင်မှုမှာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း လူအင်အားဖြင့် ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ကာ စက်များကို အသုံးပြု ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းကို လုံးဝ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ပြင် စာရေးသူ၏ အယူအဆသဘောထားနှင့် ရေးသားသည့်ပုံစံများအတိုင်း မပျက်စီးစေရန် ထိန်းသိမ်းပြီး တိကျသော ဘာသာပြန်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းပါသည်။
ဘာသာပြန် စျေးနှုန်း သိရှိရန် ဆက်သွယ်ပါ။
စာအုပ်တွေကို မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ပြန်ဆိုသင့် သနည်း?
သင်သည် ဝတ္ထုကိုရေးသားရာတွင် လပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် နှစ်ပေါင်းများစွာ အပင်ပန်းခံခဲ့ရပြီးပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဘာကြောင့်များ ဝတ္ထုရဲ့ကျော်ကြားမှုကို မြန်မာဘာသာ တစ်မျိုးတည်း ထုတ်ဝေပြီး ကန့်သတ်ထားမလဲ? မြန်မာလိုမဖတ်နိုင်တဲ့ ဘီလီယံနှင့်ချီသော လူများဆီသို့ သင့်လက်ရာများ ရောက်ရှိရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ဆိုပေးနေပါတယ်။ ကျွမ်းကျင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်မှုများဖြင့် စာဖတ်သူများတိုးပွားစေရုံသာမက ရောင်းအားကိုပါ တိုးမြှင့်နိုင်မည်။
မည်သည့် စာအုပ်ဘာသာပြန် ဝန်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးနေပါသလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့မှ မြန်မာဘာသာမှ အမေရိကန် အင်္ဂလိပ် သို့မဟုတ် ဗြိတိန် အင်္ဂလိပ်စာများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်္ဂလိပ်အဖွဲ့မှနေ၍ သီးခြား မူကြမ်းစာစီစစ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ အခြားသော ဘာသာပြန် ဝန်ဆောင်မှုများမှ ဝတ္ထုအား ဘာသာပြန်စဉ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့မှ စာသားများကို ဘာသာပြန်ပေး ပြီးသည်နှင့် ထောက်နေသောစာစုများကို ချောမွေ့အောင်နှင့် အသေးအဖွဲ့အမှားများကအစ ပြုပြင် ပေးသော အင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်အဖွဲ့ဆီသို့ ဝတ္ထုကို ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ထို့နောက် ProofreadingServices.com မှ မူကြမ်းစီစစ်ပေးခြင်း နှင့်တည်းဖြတ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု ကို လုပ်ဆောင်ပေးမည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့တွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အတော်ဆုံး အင်္ဂလိပ်စာ တည်းဖြတ်သူများထဲမှ အချို့ ပါဝင်ပါသည်။
ဘယ်လို စာမူအမျိုးအစားတွေကို ကျွန်ုပ်တို့က ဘာသာပြန်ဆိုပါသလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့က ဝတ္ထုများ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်များ၊ ပုံပြင်စာအုပ်များ နှင့် အခြားစာများကို တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ စာရေးသူများအတွက် ဘာသာပြန်ဆိုပေးနေပါတယ်။ အထူးအားဖြင့်…
စာပေဆိုင်ရာ ဝတ္ထုများ- သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုများ၊ ထူးခြားဆန်းကြယ်ဝတ္ထုများ၊ အချစ် ဝတ္ထုများ နှင့် သမိုင်း ဝတ္ထုများကဲ့သို့သော
ပညာရေးဆိုင်ရာ ဝတ္ထုများ- အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ သမိုင်းဘာသာရပ်၊ သိပ္ပံ ပညာရပ် နှင့် အခြားဘာသာရပ်များ ကဲ့သို့သော စာမူများ
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဝတ္ထုများ- ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းနှင့် ဆက်လျှဉ်းသောစာအုပ်များ၊ ခေါင်းဆောင်မှု ဆိုင်ရာ စာအုပ်များနှင့် အခြားစာအုပ်များ
ကျွန်ုပ်တို့မှာ ထောင်နှင့်ချီသော ဖောက်သည်များမှအပ်နှံသည့် အမျိုးအစားစုံလင်လှစွာသော စာအုပ်များနှင့် ဘာသာရပ်များကို လူငယ်စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုများ မှစကာ ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်းများ၊ ချက်နည်းပြုတ်နည်းစာအုပ်များ၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၊ နည်းပညာ နှင့် အနုပညာ တို့နှင့် ပက်သက်သည့် လက်တွေ့စာအုပ်များ အထိ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ဖူးပါသည်။ အနှစ်ချုပ်အနေနှင့်ပြောရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်သက်အတွေ့အကြုံများနှင့် စကားအသုံးအနှုန်းကျွမ်းကျွင်သူများပေါင်းစည်းထားသည့် အဖွဲ့ကြီးမှာ မည်သည့်ခေါင်းစဉ်ကိုမဆို ဘာသာတော်တော်များများဖြင့် ပြန်ဆိုပေးနိုင်ပြီး မူကြမ်းစစ်ဆေးမှုပါ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
သင့်စာအုပ်အတွက် ဘာ့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မြန်မာဘာသာပြန် ဝန်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်သင့်တာလဲ?
ProofreadingServices.com တွင်ဝတ္ထုများကို အထွေထွေဘာသာပြန်သူများအား ပြန်ဆိုစေမည့်အစား သီးသန့်စာပေဘာသာပြန်သူများကိုသာ ပြန်ဆိုစေပါသည်။ ကျွမ်းကျင်စာပေဘာသာပြန်သူမှ သင့်ဝတ္ထုအမျိုးအစားကို လေ့လာကာ စကားလုံးတလုံးချင်းစီကို သေချာဂရုပြုပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင့်ရေးဟန်များနှင့် အယူအဆများအတိုင်း သင့်မူမပျက်ထိန်းသိမ်းပြန်ဆိုပေးသွားမည်။
တကမ္ဘာလုံးရှိစာရေးသူများအားလုံးကို ထိပ်တန်းဘာသာပြန်သူများ၊ အင်္ဂလိပ်မူကြမ်းစီစစ်ပေးမှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့်နေရာတွင်နေသည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၏ သီးခြားစာမူကြမ်းစီစစ်ပေးမှုဖြင့် မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုပေးမှုမှာ သင့်စာအုပ်များကို ဝယ်ယူကာ သင့်လက်ရာများကို နှစ်သက်သူများ များပြားလာစေမည့် စာဖတ်သူများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်အတွက် အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ အရည်အသွေးမြင့်မားလှသော ဘာသာပြန် ဝန်ဆောင်မှု၊ အကောင်းမွန်ဆုံးသော အပ်နှံသူဝန်ဆောင်မှု၊ သင့်တင့်မျှတသော နှုန်းထားများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်ဟု ကတိပြုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ကိုင်ပေးမှုများကိုလည်း သင့်စိတ်တိုင်းကျစေရမည်ဟု အာမခံအပ်ပါသည်။